टी–२० सिरिजः पहिलो ओभरमै भारतलाई झड्का, पूरा गर्ला २१३ को लक्ष्य ? - Everest Dainik - News from Nepal
टी–२० सिरिजः पहिलो ओभरमै भारतलाई झड्का, पूरा गर्ला २१३ को लक्ष्य ?
काठमाडौं, माघ २७ । टी–२० सिरिज अन्तर्गतको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा न्यूजिल्याण्डले दिएको २१३ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारतले पहिलो ओभरमै विकेट गुमाएको छ । पहिलो किवेटका रुपमा शिखर धवन (५) लाई गुमाएको हो ।
उनलाई न्यूजिल्याण्डका मिचेल सेट्नरले आउट गरे । यसअघि, टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको न्यूजिल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै २१२ रन बनायो ।
याे पनि पढ्नुस न्यूजिल्याण्डमा रोहित शर्माले बनाए यी ५ रेकर्ड, किन भनिन्छ उनलाई हिटम्यान ?
उसका लागि कोलिन मनुरोले सर्बाधिक ७२ रन प्रहार गरे । बलिङमा भारतका लागि भवनेश्वर कुमार, खलिल अहमदले एकएक र कुलदीप यादवले दुई विकेट लिए । आजको खेल जसले जित्छ उसले नै यो सिरिज आफ्नो नाममा बनाउने छ ।
ट्याग्स: Dhawan, India vs New Zealand